I-Jim Pattison Broadcast Group Implements I-Matrix's Media Ad Sales Platform Kuzo Zonke Amapulatifomu Nemakethe - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Jim Pattison Broadcast Group Implements I-Matrix's Media Ad Sales Platform Yonke Amapulatifomu Namakethe
Matrix, yedwa yesikhulumi sokuthengisa isikhangiso somhlaba wonke esakhelwe abezindaba, namuhla samemezela ukuthi I-Jim Pattison Broadcast Group izoqalisa ukusebenza kwazo Isikhundla sokuthengisa isikhangiso se-Monarch media kuwo wonke amathelevishini, umsakazo, izakhiwo ze-intanethi, kuzo zonke izimakethe zazo. Ukwamukelwa kwe-enterprise-wide yesikhulumi kuzoletha umsakazo waseCanada ukuxhuma okubonakalayo okudingekayo kuwo wonke amaqembu azovumela ukubuka umbono ophelele wedatha ngenkathi ngesikhathi esifanayo abanikeze ikhono lokwenza izinqubo phakathi nokuhamba komsebenzi wabo - ukusindisa kokubili isikhathi nemali.
I-Jim Pattison Broadcast Group yayifuna isisombululo esasizobenza bakwazi ukubona, ukulandelela nokuphatha amathuba amabhizinisi amasha kanye nokuhlinzeka ngokuthuthukisayo okukhulu ekuphathweni kolwazi lwamakhasimende. Lokhu kuhlanganisa ukwamukela isisombululo esasinika ithuba lokubona nokuthuthukisa amathuba okuthengisa okuthengiswa kakhulu. I-Monarch ayihlangabezani kuphela nemigomo efunwa yiPattison kodwa, kanye nemvelo yayo eqondene nabezindaba, izobavumela ukuba bathuthuke ekusebenzeni jikelele kanye nezinqubo ukuqinisekisa ukuthi bangcono kakhulu ukusebenzisa umsebenzi wabo wokuqhubeka nokuncintisana embonini.
"I-Matrix ivele phakathi kwezinye izinketho ze-CRM esiphenywe njengethuluzi elibheke phambili lokuxazulula izixazululo, elinesitatimende esiqinisekisiwe sokwenza ngcono imiphumela ngokunciphisa imisebenzi ephindaphindiwe nokwandisa ukuthengisa," kusho uRud Schween, uMengameli uJim Pattison Broadcast Group. . "I-Monarch izoba yithuluzi elihle kakhulu futhi elisebenzisayo kubo bonke abaholi bethu bezokuthengisa kanye nezintambo ezihamba phambili."
Ukukhonza njengendawo yomphakathi ngaphakathi kwe-Jim Pattison Broadcast Groups 'operation, uMarch uzonikeza umbono obumbene wemithombo yedatha engafani, kuhlanganise nedatha yokuqala neyesithathu, kulo lonke ukuhamba komsebenzi. Esebenzisa amaphuzu amaningi okuhlanganiswa, okuhambisana ne-data aggregation kanye nokukwazi ukwenza okujwayelekile, uMarch uzoqhubeka ehlinzeka ngeqembu le-Jim Pattison Broadcast nge-enhanced real-time ukubona idatha yabo, okubenza bakwazi ukwenza izinqumo zebhizinisi ezihlakaniphile futhi ezisheshayo.
"I-tech yethu yokuthengisa isikhangiso se-ad adlulisa i-ROI ngokushesha futhi ephumelelayo ngaphandle kwesango futhi ngiyaqiniseka ukuthi i-Jim Pattison Broadcast Group izokwazi ukushaya phansi, ukukhomba amathuba okuthengisa nokuzenzakalela izinqubo kusukela ngosuku olulodwa," okwabiwe UMark Gorman, i-CEO, uMatrix. "Futhi-ke, ayihlali lapho. Siyaqhubeka nokuguqula umkhiqizo wethu kanye nomkhakha futhi njengoba kuvela izici ezintsha nokucubungula okuqhubekayo - sizozihambisa kubo bonke abasebenzisi, kunoma iyiphi inqubo engenamsebenzi kubo bonke. "
Ukuze uthole olunye ulwazi ngoMatrix, vakashela matrixformedia.com.
Mayelana ne-Jim Pattison Broadcast Group
I-Jim Pattison Broadcast Group, enehhovisi lekhanda eKamloops, BC yiqembu elikhulu kakhulu elisakazwa ngasese, elisentshonalanga-esekelwe, esiteshini zomsakazo ze-47, eziteshini zethelevishini ezivamile ze-3 nase-British Columbia, e-Alberta, eSaskatchewan naseManitoba . I-Jim Pattison Broadcast Group iyisiqhema sokuziqhenya sikaJim Pattison Group, iqembu elihlukene lezinkampani ezisebenza, esiseVancouver, esakhulile yaba yinkampani yesibili enkulu kunazo zonke e-Canada. Sicela uvakashele www.jpbroadcast.com ukuze uthole olunye ulwazi.
I-matrix yenza imidiya ibonakale ngokunika amandla ukusebenza futhi isebenze ukuthola izimali ukuze izinkampani zabezindaba zingakha okuqukethwe, ukujabulisa nokukwazisa. Umkhiqizo wayo obala, uMarch, yiyona kuphela yesikhulumi sokuthengiswa kwezentengiso emhlabeni wonke esakhelwe idatha eguquguqukayo yemidiya ekwaziswa okuthengisayo okuletha ulwazi oludingekayo ekufuneni, ukuphatha, ukuhlola nokuvala ibhizinisi. Le nkampani ilawula imali engaphezu kwezingu-$ 13 ezigidi zemali kwimali yezokukhangisa kwezindaba, ukunikeza ama-analytics ahamba phambili, ama-intelligence yokuthengisa, ama-CRM aqondene nabezindaba kanye nabathengisi bezindaba be-10,000 ukuze baphathe ngokuphumelelayo ukuhamba komsebenzi wabo. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uvakashele www.matrixformedia.com.
Okuthunyelwe kwakamuva nge-celiavine (bona konke)
IMatrix iyaqhubeka nokubonisa ukukhula nokukhula komkhakha - Disemba 5, 2019
Ingqungquthela Yesine Yonyaka Wokuthengisa Kwabezindaba ibuyela eMiami Beach, FLJanuary 22-24, 2020 - Novemba 13, 2019
I-Matrix ne-WideOrbit Yandisa Ubambiswano ukuze Izenzele i-CRM Idatha Ukugeleza Kwezinkampani Zemidiya Ngokuhlanganiswa Okusha kwe-API - Septemba 25, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ukuhlanganiswa UMark Gorman izixazululo zamatrix I-Monarch Ad Sales Platform I-Jim Pattison Broadcast Group Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual	2019-07-18
Ngaphambilini: I-Magewell Ihlukanisa Izici Ezinamandla Nezibonelo Ezintsha kanye Nomodeli Omusha ku-Family Stream ye-Encoder Family Family
Olandelayo: I-Studio Technologies 'Isibonelo Soxhumano Somsindo we-5412 Esusiwe Umsakazi Wezemidlalo Ephezulu YasePoland